Baaritaanka Xoolaha ee Bariga Afrika ee Iskaashatooyinka Barashada Quarter Sannadka 2017 Dhiirigelinta Dheeraadka
Mashruuca McKnight Foundation oo la siiyay 139 deeq ah oo dhan $ 18,608,000 oo ah qadar-sannadeedka 2017 ee deeq-lacageedka. $ 18.6 milyan oo la ansixiyey, $ 2,078,000 ayaa u tagay ururada ka shaqeeya Bariga Afrika ee Barnaamijka Cilmi Baarista Xoolaha (CCRP), kaas oo ka shaqeeya xaqiijinta helitaanka cunto nafaqo leh oo si joogta ah u soo saaro dadka maxaliga ah, istraatijiyad muhiim ah ee barnaamijkeena caalamiga ah.
CCRP waxay u shaqaysaa iyada oo loo marayo hab dhaqan bulsheed oo ku salaysan afar gobol oo juqraafi ah, oo ay ku jiraan bariga Afrika. Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa habka iskaashiga agroolojiga ee cilmi-baarista iyo wadaagidda aqoonta si loo xoojiyo awooda beeralayda yar yar, machadyada cilmi-baarista, iyo ururada horumarinta. Cuntada Cuntada ee dhowaan lagu magacaabo CCRP ayaa ah mid ka mid ah kan ugu sarreeya "118 Ururada Ilaalinta ee 2018."Waxaanu hoosta ka xarriiqay qaar ka mid ah deeqda la ansixiyay ee koontadan hoos ku qoran liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyey ayaa laga heli karaa noo keydka macluumaadka.
The Hay'adda Cilmi Baarista Beeraha iyo Xoolaha Kenya Nairobi ayaa heshay $ 450,000 muddo saddex sano ah si ay u taageeraan kala-duwanaanta beeraha yaryar. Mashruucani wuxuu diiradda saarayaa abuurista digirta badan ee kala duwan, taas oo kala duwanaan karta cuntada cuntada guriga iyo hagaajinta nafaqada, korodhka wax soo saarka iyo dakhliga, bixiyaan alaabada xoolaha, kor u qaada bacriminta ciidda, iyo xakamaynta haramaha.
McKnight ayaa sidoo kale la siiyay Jaamacadda Rongo $ 450,000 in ka badan saddex sano si loo kala sooco noocyada masagada Bariga Afrika. Masaggada waa dalag cunto oo ku yaal Bariga Afrika, mashruucuna wuxuu aqoonsadaa noocyada ugu habboon ee xaaladaha isbedelka degaanka ee soo koraya iyo horumarinta noocyo badan oo adkeynaya cayayaanka iyo cudurrada ay la kulmaan beeralayda degaanka.
"Barnaamijka Cilmi-baarista Xoolaha McKnight's wuxuu kordhiyaa ammaanka cuntada ee dadka ku nool dalalka soo koraya," ayuu yidhi Meghan Binger Brown, oo guddoomiye guddi ah. "Waxaannu sidaas samaynaynaa iyada oo la qaadanayo hab dhaqan, nidaam ku habboon beeraha beeraha, iyo taageeridda cilmi-baarista iyo wada-shaqaynta taasoo horseedi doonta wax-soo-saarka, korodhka hab-nololeedka, nafaqada wanaagsan, iyo sinnaanta."
Warka kale, McKnight ayaa soo dhaweynaya Laura Salveson sida agaasimaha cusub ee qaabilaadda iyo xarumaha. Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in xubin guddiga waqtiga dheer ee Debby Landsman loo doorto sida guddoomiyeheenna cusub. Waxaan u mahadnaqaynaa Meghan Binger Brown seddex sano oo hoggaamiye ah oo ah guddoomiye iyo guddoomiyeheeda sidii xubin guddi ah ilaa 1996. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa Bill Gregg, oo ka kicitimay guddiga ka dib sagaal sano oo adeegga khaaska ah.
Saddexdii biloodba mar
Machadka McKnight wuxuu doonayaa inuu hagaajiyo tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Waxaanu u isticmaalnaa dhammaan kheyraadkeena si aan uga soo qaybgalno, mideyno, iyo inaan xoojinno kuwa aan u adeegno. Waxaa la asaasay sanadkii 1953, waxaana madaxbannaanaa William iyo Maude McKnight, oo ah aasaaska qoyska reer Minnesota ee ku salaysan kharashka qiyaastii $ 2.2 bilyan, waxaana la siiyaa $ 90 milyan sannadka 2017. Wax dheeraad ah ka baro mcknight.org, oo na daba soco Facebook iyo Twitter.
Mawduuca: Cilmi-baarista Xoolaha Iskaashatada